Vaovao - Huangyan Yjie dia nandefa vola 352 700 yuan ho an'ny mpianatra mahantra
Vao tsy ela akory izay, ny Huangyan YJIE Plastics Co., Ltd dia nandamina ny Mpiasa hanatanteraka ny hetsika fanampiana ny mpianatra amin'ny fararano volamena 2020. Manodidina ny 50 ireo mpilatsaka an-tsitrapo avy amin'ny orinasa no nandeha tany an-tsekoly ary nandefa fanampiana sy kojakojam-pianarana ho an'ireo mpianatra mahantra 242 ao amin'ilay distrika. Ny totalin'ny fanampiana dia 352 700 yuan.
“Ireo fanomezana ireo dia avy amin'ny olona be fiahiana ara-tsosialy sy orinasa miahy izay manohana ny mpianatra amin'ny tsiroaroa. Ny orinasa dia mampiditra ny vola fanampiana ao amin'ny'Weifeng Student Aid Fund 'ho fampiharana sy fitantanana, ary mampiditra vola manokana ho an'ny tanjona manokana. Omeo fanampiana ireo ankizy sahirana amin'ny fandehanana mianatra ”
] Raha misy ny hetsika, ny mpiasa dia tsy vitan'ny hoe manao tsara ny asa alohan'ny famoahana ny vola fanampiana fa mamporisika ny mpandray koa mba ho feno fankasitrahana sy hahomby amin'ny fianarany ary ho tonga olona tsara.
Fonosana ho an'ny tavoahangy divay, Barware plastika, Tavoahangy misy alika ho an'ny biby, Barware Set, Barware fampiroboroboana, Barware tsy vaky,